Iwu Iri (1-17)
Egwu tụrụ ndị Izrel n’ihi ihe ha hụrụ ma nụ (18-21)
A gwara ndị Izrel otú ha ga-esi na-efe Chineke (22-26)
20 Chineke wee kwuo ihe ndị a niile, sị:+ 2 “Abụ m Jehova Chineke gị, onye kpọpụtara gị n’Ijipt, bụ́ ebe ị nọ na-agba ohu.*+ 3 Enwela chi ọ bụla ọzọ ma e wepụ m.+ 4 “Emerela onwe gị arụsị a pịrị apị ma ọ bụ ihe yiri ihe ọ bụla dị n’eluigwe ma ọ bụ ihe dị n’ụwa ma ọ bụ ihe dị na mmiri ndị dị n’ụwa.+ 5 Akpọrọla ha isiala, ekwekwala ka a rata gị ka i fee ha ofufe,+ n’ihi na mụnwa bụ́ Jehova Chineke gị bụ Chineke nke chọrọ ka a na-efe naanị ya ofufe.+ M na-ata ụmụ ndị kpọrọ m asị ahụhụ, na-atakwa ọgbọ ha nke atọ nakwa ọgbọ ha nke anọ ahụhụ n’ihi mmehie ndị nna ha. 6 Ma m na-egosi otu puku ọgbọ nke ndị hụrụ m n’anya ma na-edebe iwu m+ na m hụrụ ha n’anya. 7 “Ejila aha Jehova bụ́ Chineke gị eme ihe efu+ n’ihi na Jehova ga-ata onye ji aha ya eme ihe efu ahụhụ.+ 8 “Cheta Ụbọchị Izu Ike ka i doo ya nsọ.+ 9 Ị ga-eji ụbọchị isii jee ozi ma rụọ ọrụ gị niile.+ 10 Ma ụbọchị nke asaa bụ ụbọchị izu ike a ga na-edebere Jehova bụ́ Chineke gị. Arụla ọrụ ọ bụla, ma gị ma nwa gị nwoke ma nwa gị nwaanyị ma ohu gị nwoke ma ohu gị nwaanyị ma anụ ụlọ gị ma onye mbịarambịa nọ n’ebe i bi.+ 11 N’ihi na Jehova ji ụbọchị isii kee eluigwe na ụwa, oké osimiri, na ihe niile dị n’ime ha. O wee malite izu ike n’ụbọchị nke asaa.+ Ọ bụ ya mere Jehova ji gọzie Ụbọchị Izu Ike ma mee ka ọ dị nsọ. 12 “Sọpụrụ nne gị na nna gị,+ ka i wee dị ogologo ndụ n’ala ahụ Jehova bụ́ Chineke gị ga-enye gị.+ 13 “Egbula mmadụ.*+ 14 “Akwala iko.+ 15 “Ezula ohi.+ 16 “Agbagidela mmadụ ibe gị akaebe ụgha.+ 17 “Agụụ iweghara ụlọ mmadụ ibe gị agụla gị. Agụụ nwunye mmadụ ibe gị+ ma ọ bụ ohu ya nwoke ma ọ bụ ohu ya nwaanyị ma ọ bụ ehi ya ma ọ bụ jakị ya ma ọ bụ ihe ọ bụla bụ́ nke mmadụ ibe gị agụla gị.”+ 18 Mmadụ niile nọ na-anụ ụda égbè eluigwe na ụda opi, na-ahụkwa àmụ̀mà na-egbunụ na ugwu ahụ na-akwụ anwụrụ. Ihe ndị a ha hụrụ ma nụ ụda ha mere ka ha maa jijiji ma guzoro n’ebe dị anya.+ 19 Ha wee sị Mosis: “Gwawa anyị okwu. Anyị ga-ege ntị. Ma ka Chineke ghara ịgwa anyị okwu, ka anyị ghara ịnwụ.”+ 20 Mosis wee sị ha: “Unu atụla egwu n’ihi na ezi Chineke bịara ịnwale unu,+ ka unu wee na-atụ egwu ya, ka unu ghara imehie.”+ 21 Ha wee guzoro n’ebe dị anya, ma Mosis gara nso n’ígwé ojii ahụ bụ́ ebe ezi Chineke nọ.+ 22 Jehova gwaziri Mosis, sị: “Gwa ndị Izrel, sị, ‘Unu ejirila anya unu hụ na m si n’eluigwe gwa unu okwu.+ 23 Unu emela chi ọlaọcha ma ọ bụ chi ọlaedo n’ihi na unu agaghị enwe chi ọ bụla ọzọ ma e wepụ m.+ 24 Unu ga-eji ájá rụọrọ m ebe ịchụàjà. Unu ga-achụkwa àjà unu a na-esu ọkụ na àjà udo unu nakwa atụrụ unu na ehi unu n’elu ya. M ga-abịakwute unu n’ebe ọ bụla m họọrọ ka a na-echeta aha m,*+ m ga-agọzikwa unu. 25 Ọ bụrụ na unu ga-eji nkume rụọrọ m ebe ịchụàjà, unu ejila nkume a wara awa rụọ ya.+ N’ihi na unu ga-emerụ ya ma ọ bụrụ na unu ejiri chịsụl waa ya. 26 Unu arụnyela steepụ n’ebe ịchụàjà m nke unu ga-esi na-agbago na ya, ka e wee ghara ikpughe ihe unu ji bụrụ nwoke* n’elu ya.’
^ Ma ọ bụ “m họọrọ ka a nọrọ na-efe m.”
^ Na Hibru, “ọtọ unu.”